उमाशंकर प्रसाद, पिएचडी
सहप्राध्यापक, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग
रौतहट गरुडाका उमाशंकर प्रसाद १८ वर्षयता त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक पदमा कार्यरत छन् । उनले भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट पिएचडी गरेका हुन् । संघीय शासन व्यवस्था र खास गरी वित्तीय संघीयता सम्बन्धमा गहिरो अभिरुचि राख्दै आएका उनी तीनमहिनायता स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य बिमा बोर्डको पनि अध्यक्ष छन् । नेपालको आवश्यकता नै संघीय शासन रहेको औंल्याउने प्रसाद संघीयताले नै नेपाललाई एक दशकभित्र समृद्ध बनाउनेमा विश्वस्त छन् । नेपालजस्तो बहुविविधतायुक्त देशमा संघीय शासन नै अचूक अस्त्र हुने बताउने उनी विगतको एकात्मक शासन व्यवस्थामा नेपालसापेक्ष आर्थिक नीति नहुँदा अपेक्षित विकास हुन नसकेको जिकिर गर्छन् । उनी प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधानप्रदत्त खर्च गर्ने जिम्मेवारीको तुलनामा आम्दानीको जिम्मेवारीको हिस्सा निकै कम रहेको बताउँछन् । तिनको आम्दानीका लागि कर, राजस्व जस्ता अधिकार क्षेत्रमा सुधारका लागि निरन्तर छलफल गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउने प्रसादसँग वित्तीय संघीयता, संविधानमा लिइएको आर्थिक नीति र नेपालको विकासमा आर्थिक क्षेत्रमा गरिनुपर्ने परिवर्तनका सन्दर्भमा भगवान खनालले गरेको कुराकानीको सार :
संवैधानिक अर्थराजनीतिलाई तपाईं कसरी विश्लेषण गर्न चाहनुहुन्छ ?
संवैधानिक व्यवस्थालाई अर्थराजनीतिसँग जोड्दा समाजवादउन्मुख मुलुक बनाउने भनिएको छ । यसका लागि नेपालले तीनखम्बे अर्थनीति अंगीकार गरेको छ । सरकारी, सहकारी र निजी गरी तीनखम्बे नीतिबाटै समाजवादउन्मुख हुने हो । विश्वमा धेरैजसो देशमा चलेको मोडल पनि यही हो । हाम्रो संविधानमा दुईवटा तत्व अझै प्रगतिशील छ । एक, सहकारी र अर्को समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था भनेर कल्पना गरिएको छ । समाजवादउन्मुख भनेको हरेक नागरिकलाई अवसर प्रदान गर्ने हो । हरेक नागरिक आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित नहुनु नै यसको मान्यता हो । सर्वव्यापी स्वास्थ्य, सर्वव्यापी शिक्षा, खानेपानी, बिजुलीलगायतका सम्पूर्ण आधारभूत सुविधाबाट कुनै पनि व्यक्ति वञ्चित हुन नपरोस् । यो कुरा संविधानले कल्पना गरेकाले यस मामिलामा असाध्यै प्रगतिशील छ ।
तीन तहका सरकारबीचको होरिजन्टल (क्षितीजीय) र भर्टिकल (शीर्षात्मक) सम्बन्धलाई सरल भाषामा कसरी व्याख्या गर्ने ?
संविधानमा तीन तहका सरकारले के गर्ने भन्ने अधिकारहरू स्पष्ट छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका सरकारका लागि काम पनि स्पष्ट छ । तिनका खर्चको उत्तरदायित्व पनि विश्वव्यापी मान्यताअनुसार छ । विश्वका अन्य मुलुकमा यसैगरी दायित्व तोकिएको हुन्छ । यसैगरी अर्को पक्ष भनेको कर हो, जुन सरकारको खर्चको बोझ हुन्छ त्यही सरकारले कर, राजस्व संकलन गर्न सकेमा राम्रो हो । यो पनि विश्वव्यापी मान्यता नै हो ।
संविधानमा जति कर प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई छुट्ट्याइएको छ खर्च गर्ने दायित्वको तुलनामा राजस्व संकलन गर्ने क्षमता कम दिइएको छ ।
यो तुरुन्तै गर्न पनि सकिँदैन । करका सम्बन्धमा क्रमश: सुधार गर्दै जाने पनि हो । यो पनि विश्वव्यापी मान्यता नै हो । यसमा पनि धेरैजसो छुट्ट्याइएको छ । राजस्व संकलन र खर्चको कुरा सुधार गर्दै जाने हो ।
भर्टिकल ट्रान्सफर भनेको पहिला संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने बजेट छुट्ट्याउँछ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई यति बजेट भनेर छुट्ट्याएपछि त्यसरी छुट्ट्याएको पैसालाई फेरि प्रत्येक प्रदेश र प्रत्येक स्थानीय सरकारलाई बाँडफाँड गर्नुलाई होरिजन्टल ट्रान्सफर भनिन्छ । यो पनि संसारभर चलेको अभ्यास हो । भर्टिकल ट्रान्सफर कसरी गर्ने भनेर सूचकांक बनाएर खर्चको बाँडफाँड गर्नुपर्छ ।
जब म भारतबाट फर्र्किएँ, त्यसबेलादेखि नै यस्ता ट्रान्सफर सूचकहरू बनाएर गरिनुपर्छ भन्दै आएको व्यक्ति हुँ । अहिले सूचकांकका आधारमा नै बजेट ट्रान्सफर गरिएको छ । यसका लागि संघीय सरकारले संघीय कानुन बनाएर काम गरेको पाएको छु । जस्तै बजेट ट्रान्सफर गर्दा मानव विकास सूचकांक, गरिबीको सूचकांकलगायतलाई हेरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले भर्टिकल ट्रान्सफरका लागि सूचक बनाइसकेको अवस्था छ । आयोगसँग मैले मानव विकास सूचकांकका लागि ५ प्रतिशत भार कम भयो भनेको छु । आयोगले यसलाई छलफल गर्दै जाँदा सुधार गर्न सकिन्छ पनि भनेको छ । त्यसकारण छलफल गर्दै जाँदा कसरी राम्रो गर्ने भन्ने कुरा आइहाल्छ ।
वित्तीय संघीयतासम्बन्धी अधिकांश साहित्यमा यसलाई देशको भूराजनीतिक परिवेशले प्रभाव पार्छ भनिन्छ, नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ के हो ?
नेपाल चीन र भारतको बीचमा हुनु साह्रै भाग्यमानी देश हो ।
यदि हामीले गर्न सक्यौं भने हाम्रो बजार भनेको ३ करोड जनसंख्याका लागि मात्रै होइन, अढाई अर्ब जनसंख्याको बजार छ; चीन र भारतलाई समेत हेर्दा ।
स्वीजरल्यान्ड जर्मनी, फ्रान्स र इटालीको बीचमा छ, उसले तीनवटै देशमा आफ्नो वस्तु पुराएर समृद्ध भएको छ । त्यसकारण भूराजनीतिलाई त उपयोग गर्ने हो । उपयोग गर्दा विन–विन अवस्था सिर्जना हुन्छ । अहिलेको संसार नै विन–विन अवस्थाको हो । अहिले पहिलाको जस्तो समाज छैन, संसारभर पढेलेखेका मानिस छन् । हामीले यो अवसरको फाइदा लिनुपर्छ । हाम्रो फाइदा पनि उनीहरूलाई दिन सक्नु पर्छ । यसमा हामी कतै न कतै चुकेका छौं । कसरी अढाई अर्ब जनसंख्यालाई फाइदा पुराउने भन्ने चाहिँ हाम्रो सोच, लक्ष्य, योजनामा भर पर्छ । संविधान पनि द्विदेशीय, त्रिदेशीय सम्बन्ध कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट छँदै छ ।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनपछि देश कसरी समृद्ध हुन्छ ?
निश्चय नै अब प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुसम्पन्न बनाउने हो । उनीहरूले खर्च गर्ने सबै अधिकार पाएका छन् । जहाँसम्म वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनपछि समृद्धिको कुरा छ, यसमा विगतका योजनाहरूलाई एकपटक पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ ।
हामी अहिले १५ औं योजना बनाउँदै छौं । बितेका १४ वटा योजना अध्ययन गर्दा मैले के पाएँ भने नेपालमा वास्तविक विकासको शृङ्खला नयाँ संविधानबाट मात्रै सुरु भएको रहेछ ।
पहिलो योजनादेखि छैटौं योजनासम्म आम्दानी बढाउने, जीडीपी बढाउने, रोजगारी बढाउने कुरा मात्र गरिएको रहेछ, जुन सामान्य कुरा हुन् । यी कुरा जुनसुकै देशले पनि गरिरहेका हुन्छन् ।
नेपाललाई चाहिने सैद्धान्तिक बाटो अपनाएको भर्खर पाँच–सात वर्ष मात्रै भयो । संघीय शासन व्यवस्था अँगालेपछि मात्रै देशसापेक्ष विकासका कुरा उठाउन थालेका हौं । जुन देशमा विविधता छ, त्यहाँ संघीयता चाहिन्छ । नेपालजस्तो बहुविधितायुक्त देशमा एकात्मक शासन व्यवस्थाले विकासको काम गर्दैनथ्यो । अहिलेसम्मका संविधानमा जति अभ्यास भए, नेपालको जनसंख्या, जातजाति, भूगोल, सामाजिक–आर्थिक परिवेश सुहाउँदो आर्थिक नीति नै थिएन । तर, छैटौं योजनामा चाहिँ क्षेत्रीय असन्तुलन कम गर्ने भनेर एउटा एजेन्डा राखिएको देखिन्छ, तर पनि क्षेत्रीय सन्तुलन कम कसरी भन्नेबारे बोलेको पाइएन । त्यसले पनि बाटोचाहिँ के भनेर पहिल्याउन सकेको पाइएन ।
नेपालको आर्थिक सामाजिक भौगोलिक परिवेशअनुसार विकास सुरु भएको भर्खर पाँच–सात वर्ष मात्रै भएको छ । एसईई परीक्षा दिने विद्यार्थीले जुन विषयको परीक्षा दिनुपर्ने हो, दस कक्षामा त्यही विषय पढेमा मात्रै सफल हुन्छ । नेपालीले अमेरिकाको र अमेरिकीले नेपालको पाठ्यक्रम पढेर गएमा सफल भइन्न नि ! आर्थिक नीतिको सन्दर्भमा पनि अहिलेसम्म नेपालले अरु देशको नक्कल गरेका थियौं । नेपालमा भए पनि आर्थिक नीति अन्य देशको उपयोग गरेका छौं, अनि कसरी विकास हुने ? बल्ल हामीले नेपालसापेक्ष आर्थिक नीति बनाएका छौं । अबको एक दशकमा नेपालको रूप परिवर्तन हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । किनभने अब हामी नेपालको एसईई परीक्षाका लागि नेपालकै पाठ्यक्रम अध्ययन गर्दै छौं ।
हिजो हामीले विकेन्द्रीकरणको नीति अपनाउँदा विकास भएन भन्ने यहाँको भनाइ हो ?
विकेन्द्रीकरण र संघीय शासन भनेको फरक हो । जुन देशमा विविधता कम छ, त्यहाँ विकेन्द्रीकरणले काम गर्छ ।
तर बहुविविधता भएको देशमा विकेन्द्रीकरणले काम गर्दैन, संघीयता नै चाहिन्छ । हिजो विकेन्द्रीकरण असफल हुनुको कारण पनि यही हो ।
जस्तै उदाहरणका लागि अहिले मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशको विकासका लागि खुलेर छलफल गर्नुभएको हामी सबैले देखेको र महसुस गरिरहेका छौं, तर हिजो अञ्चलाधीश, क्षेत्रीय निर्देशकहरू सक्दैनथे । अहिले अधिकार निक्षेपण भएको छ । प्रधानमन्त्रीले दृढताका साथ भनिरहनुभएको छ कि संघीयतामा नेपाल समृद्ध हुन्छ । उहाँले यसबारेमा ढुक्कसँग सबैसँग संवाद गरिरहनुभएको छ । प्रदेशमा जाँदा पनि उहाँले मिलेर काम गरौं भन्नुभएकै छ । प्रम, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्री सबै देशलाई समृद्ध र सुखी बनाउन कटिबद्ध हुनहुन्छ । म केही अघि गाउँ जाँदा देखें, त्यहाँका अध्यक्ष, प्रमुखहरू विकासका काममा सरिक हुनुभएको छ । ठाउँठाउँमा सडक पिच भएका छन् भने नयाँ पनि बनिरहेका छन् । यसैगरी अस्पताल, विद्यालय, खानेपानीका कामहरू भइरहेका छन् । पछिल्लो समय गाउँघरमा पनि व्यापक रूपमा काम भइरहेको प्रत्याभूति भएको छ । विकास र परिवर्तनका लागि स्थानीय रूपमा पनि निकै छलफल चलेको छ । पूर्वाधारका पनि काम भएको छ । यो सबै भनेको समृद्धिकै लागि त हो नि !
वित्तीय संंघीयतामा नेपालको आफ्ना मौलिक पक्ष के–के छन् ?
हाम्रो वित्तीय संघीयतामा मौलिकपन र सिर्जनाशीलता छ । मैले माथि पनि भनिसकें, विगतका योजना सामान्य थिए, खास दिशानिर्देश थिएनन् । छैटौं योजनाले क्षेत्रीय सन्तुलन बढाउँदै जाने भन्यो, तर दसौं योजनासम्म आइपुग्दा साविकका स्थानीय निकायमा खर्चको दायित्व प्रदान गरिएन । यही नहुँदा माओवादी आन्दोलन, मधेस आन्दोलन भए । साविकका स्थानीय निकायमा खर्चको दायित्व प्रदान गरेको भए आन्दोलन हुँदैनथ्यो । हिजो हामीले प्रशासनिक संघीयता अपनायौं । जस्तै : जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्रमा विभाजन गरियो । राजनीतिक संघीयता भयो, तर वित्तीय संघीयता भएन । वित्त वा आर्थिक अधिकार विकेन्द्रीकरण भएन । आन्दोलनहरूले उठाएको आवाज यही हो । नितान्त रूपमा भन्नुपर्दा माओवादी र मधेस आन्दोलनले नेपाललाई संघीय स्वरूपले नै समृद्ध बनाउँछ भन्ने स्पष्ट आवाज उठाएको थियो । यो नेपालको माटो सुहाउँदो आफ्नै आवाज हो ।
एकाधबाहेक अहिले संघीयतालाई आत्मसात् नगर्ने व्यक्तित्व नेपालमा छैनन् । संघीयता नै समृद्धिको बाटो भनेका छन् । यसकारण यो हाम्रै सिद्धान्त हो ।
खासगरी विकसित र धनी देशमा सफल भएको संघीयता नेपालजस्तो आर्थिक रूपमा गरिब र विकासोन्मुख देशमा कसरी दिगो हुन्छ ?
हामी आर्थिक वृद्धिमा मात्र विपन्न हो । हामी सामाजिक अवस्थामा विपन्न छैनौं । हिजोको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य हामीले हासिल गरेकै हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता सामाजिक विकासका पक्षमा हामीले लक्ष्य प्राप्त ग¥यौं । आर्थिक वृद्धि हुन नसक्नुमा चाहिँ बाटो नै गलत थियो । नत्रभने शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा लक्ष्य हासिल गर्ने, आर्थिक क्षेत्रमा मात्र किन नसक्ने ? किनकि विगतमा हामीले आत्मसात् गरेको आर्थिक नीति नै सही थिएन ।
जो व्यक्ति पढ्न पनि सक्छ, स्वास्थ्यमा पनि राम्रो गर्न सक्छ तर कमाउनचाहिँ नसक्ने भन्ने नेपालमा विचित्र भइरहेको छ ।
यसको प्रमुख कारण भनेकै माटो सुहाउँदो आर्थिक नीति अपनाउन सकिएन । सही आर्थिक नीतिको अभाव हो । मेरो विचारमा हिजो गलत आर्थिक मोडल अपनाइएको भन्दा पनि आर्थिक पक्षमा एक्सपोल्लर गर्न सकिएन । हेर्नोस्, मान्छेको दिमाग जहाँसम्म पुग्छ, त्यहींसम्म काम गर्ने न हो । विगतमा माटो सुहाउँदो आर्थिक नीति चाहिन्छ भन्नेमा ख्याल नपुगेको हो ।
त्यसो भए आर्थिक नीतिको अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धानमा विश्वविश्द्यालयका भूमिका पनि कमजोर रहे ?
हाम्रो पनि अलि ढिलै ध्यान पुगेको हो जस्तो लाग्छ । यसमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पनि चुकेको अवस्था हो । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले समयमै संघीयताले नै समृद्धि आउँछ भनेर सोच पुराउनुपथ्र्यो । राष्ट्रिय योजना आयोगमा मेरै विभागबाट धेरै साथीहरू माननीय भएर जानुहुन्छ । सबै कुरामा ध्यान नपुग्नु स्वाभाविकै हो । एउटा के हो भने असफल हुँदै जाँदा सफल हुने उपाय खोजिने र सफल हुने हो । अहिले समस्या दूर भएको छ र हामी दुरुस्त भएका छौं भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
विगतको आर्थिक नीतिमा खोट थियो भनिरहँदा अब चाहिँ कस्तो आर्थिक नीति चाहिन्छ ?
यसमा मेरो दुईवटा दृष्टिकोण छ । पहिलो भनेको हामी सर्भिस र व्यापारबाट उत्पादनमा परिवर्तन हुनैपर्छ । उत्पादनमा हामी कमजोर भयौं । जुन देशमा उत्पादन कम हुन्छ, त्यहाँ व्यापारघाटा बढी हुन्छ । अब हामीले उत्पादन बढाउनुपर्छ । उत्पादन भनेको ठूलो नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । स्वीजरल्यान्डजस्तो देशमा घरघरमा चकलेट बनाएर संसारभर पुराइने रहेछ । नेपालमा किबी प्रशस्तै उत्पादन गर्न सकिन्छ । हामी रक्सी विदेशबाट मगाउँछौं तर आफ्नै स्याउ खेर गइरहेको छ । जुम्लालगायतमा यो काम गर्न सकिन्छ । मासु पनि हामी उत्पादन गर्न सक्छौं । मासु आयात बढेको छ । हामी सानासाना क्षेत्रमा उत्पादन गरी आयात रोक्न सक्छौं । खसीको मासु, फलफूल, तरकारीको व्यापारघाटा अपत्यारिलो छ, व्यापक छ । यी मात्रै पनि कम गर्न सक्यौं भने धेरै उपलब्धि हुन्छ । यसैले अब हामी ट्रेड निर्देशित होइन, उत्पादनमुखी हुनैपर्छ । ससाना उत्पादनलाई पनि ध्यानमा राखी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जानैपर्छ ।
दोस्रो कुरा, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सम्बन्ध बढाउनुपर्छ । जस्तै, भारत र चीनको बजारमा हामी प्रवेश गर्नैपर्छ । चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ ल्याएको छ भने भारतले बिजुलीको कुरा गरेको छ । अब भनेको फाइदा लिने पनि र दिने पनि दुवै कार्य गर्नुपर्छ । यो माग्ने बेला होइन, हामीले दिने पनि हो । अब विन–विन अवस्थामा जानुपर्छ; चाहे अमेरिका, बेलायत, जापान जोसुकैसँग होस् । स्वीजरल्यान्डले हामीलाई दिन्छ भने हामी पनि उसलाई चिया दिन सक्छौं । जापानले केही दिन्छ भने उसलाई पनि हामीले पनि आँप दिन सकिन्छ । मेरो भनाइ के हो भने पैसा देऊ, पैसा देऊ मात्रै भन्ने होइन, लगानी गर्नुस्, हामी उत्पादन गर्छौं र त्यसलाई केही वर्षसम्म तपाईंहरू लैजानुस् भन्ने हो । त्यसपछि हामी खाउँला । माग्ने भन्दा पनि उत्पादनका लागि लगानी गर भन्ने हो । यसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धका लागि विन–विनको अवस्था सिर्जना गर्छ ।
चालू आवमा तल्ला एकाइहरूमा बजेटलगायत हस्तान्तरण गर्न तथ्यांक अभाव झेल्नुप¥यो, आगामी आवमा यस्तो समस्या नदोहोरिएला नि ?
संघीय व्यवस्थामा कुन सरकारमा कति पैसा पठाउने, बजेट बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्नेको लागि यकिन तथ्यांक चाहिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने बजेटका लागि यकिन तथ्यांक चाहिन्छ । अहिले तथ्यांकको अभाव छ । मानव विकास सूचकांक कुन तहको के छ ? गरिबीलगायत के छ ? भन्ने थाहा छैन । त्यस कारणले ७ सय ५३ स्थानीय तह र ७ प्रदेशको तथ्यांक छैन । त्यसले राजस्वको सम्भावना के–कति, खर्चको आवश्यकता के–कति हो भन्ने अभाव भएको हो । कर कति उठाउन सकिन्छ, गैरकर कति उठाउन सकिन्छ भन्ने यकिन तथ्यांकको पनि अभाव देखियो । यसले गर्दा सूचक बनाउन सकिएको छैन । तर, काम द्रुत गतिमा भइरहेकाले आगामी आवको बजेटसम्मका लागि भने पनि यकिन तथ्यांकहरूको व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने लाग्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत प्रादेशिक नीति तथा योजना आयोगले काम गरिरहेकै छन् । विगतका उपलब्धिलाई छाडेर भन्ने हो भने केन्द्रमा योजना आयोगको भूमिका झनै अपरिहार्य छ । प्रदेशको विकासमा पनि नीति तथा योजना आयोग चाहिन्छ । दुवै आयोगहरूले अझै वाटर टाइट योजना ल्याउनु आवश्यक छ । यी सबैका लागि तल्ला एकाइको तथ्यांक संकलन र सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
संघीयतामा अधिकार निक्षेपण भएसँगै भ्रष्टाचार पनि बढ्छ भनेर आलोचना गरिएको पाइन्छ । यसबाट हामी कसरी जोगिने ?
ठीकै हो, यो संसारभर नै घट्ने घटना हो । यसमा सबै सजग हुनुपर्छ । जब संघीय स्वरूपको शासन पद्धति अपनाइन्छ, सुरुका केही वर्ष यस्ता घट्ना घट्छन् । तल्ला एकाईहरूमा दक्ष, क्षमतावान् जनशक्ति अभावका कारणले यो हुने हो । ऐतिहासिक हिसाबले पनि यो केही समय रहेर बिस्तारै घट्दै जान्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि यही होला ।